အပျိုဖျန်းလေးနဲ့သဘာရင့် – မြန်မာသတင်းစုံ
Posted on April 2, 2021 Author admin	Comments Off on အပျိုဖျန်းလေးနဲ့သဘာရင့်
ဆရာအတက်သင်ကျောင်း ဆင်းပြီးနောက် ဖြူဖြူတစ်ယောက် တာဝန်ကျရာ နောင်ချိုမြို့ရှိ အလယ်တန်းကျောင်းတွင် မူလတန်းပြ ဆရာမအဖြစ် ရောက်ရှိခဲ့သည်။သူမ၏ အသက်သည် 22 နှစ်သာ ရှိသေးပြီး အချိုးကြ ဘောဒီ ကို ပိုင်ဆိုင်ထားသူ ဖြစ်သည်။ မပိန်မပါး ခန္ဓာကိုယ်နှင့် လိုက်ဖက်စွာ တင်သား ရင်သားများက ကြည့်၍ ကောင်းလှသည်။ အရပ်မှာ 5′ 4″ ခန့်ရှိပြီး တင်ပါးစုံထိ ရှည်လျှားသော ဆံနွယ်များက ဆရာမ ဆိုသည့် ဂုဏ်ပုဒ်ကို တင့်တယ်စေသည်။ ပါးပြင်တွင် စံပါယ်တင်မှည့်လေး ပါပြီး မျက်လုံး ဝိုင်းဝိုင်း၊ မျက်တောင်ကော့ကော့၊ နှာတံဖြောင့်ဆင်းကာ အလွန်ပင် ချစ်စဖွယ် ကောင်းလှသည်။ ပြုံးလိုက်တိုင်း ပေါ်လာသော ပါးချိုင့်လေးက နှစ်လိုဖွယ် ကောင်းလှသည်။ နယ်မှ တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန် ရောက်ရှိလာကြသော ဆရာ/မ များအား ကျောင်းရှိ အဆောင်တစ်ခုတွင် နေရာ ချပေးထားသည်။ ဖြူဖြူနှင့်အတူ မန္တလေးမှ လာသော ဆရာမ ဆွေဆွေနှင့် တစ်ခန်း နေရပြီး၊ သူမတို့၏ ဘေးခြင်းကပ်တွင် ကျောင်းဆရာ ကိုအောင်နိုင်နှင့် မဝေတို့ လင်မယား နေကြသည်။ ကျောင်းဝင်းထဲတွင် ကျောင်းစောင့် လင်မယားလည်း နေသည်။ ကျောင်းစောင့်ကိုမြမောင်သည် အသက် 45 နှစ်ခန့်ရှိပြီး ထောင်ထောင်မောင်းမောင်းနှင့် ဗလတောင့်သည်။ အနောက်တိုင်း ဆေးဝါးအကြောင်း အနည်းငယ် တက်ကျွမ်းသော ဒေါက်တာ ရမ်းကု ဖြစ်ကာ နှာစီး ချောင်းဆိုး လောက်ကတော့ ကိုမြမောင် စပ်ပေးသည့် ဆေးနှင့် ပျောက်ကင်းသည်။ သူ၏မိန်းမ ဒေါ်အေးက ကျောင်းဈေးရောင်းရင်း ဖြူဖြူတို့အတွက် ချက်ရေးပြုတ်ရေး တာဝန်ယူပေးသည်။
ဆရာမ ဒေါ်နွယ်နွယ်တစ်ဦးသာ နယ်ခံ ဖြစ်ပြီး နောင်ချို မြို့ထဲတွင် နေသည်။ ဒေါ်နွယ်နွယ်၏ အမျိုးသား ကိုအိုက်စံမှာ ရှမ်း ဖြစ်ပြီး ဆေးခြောက် ရှူတက်သည်။ ဆွေဆွေသည် ကျောင်းဆရာမပင် ဖြစ်လင့်ကစား ဗျာပွေသူ ဖြစ်သည်။ မန္တလေးတွင် ရီးစား ရှိသော်လည်း နောင်ချိုမြို့သို့ ရောက်သောအခါ နောက်တစ်ယောက်နှင့် ရီးစား ဖြစ်နေပြီ။ ဆရာမဆိုသည့် သိက္ခါကို ထိမ်းသည့်အနေနှင့် မည်သူမျှမသိအောင် တိတ်တိတ်လေး ထားခြင်း ဖြစ်သည်။ ဖြူဖြူ့ကိုတော့ သူမ၏ ရီးစားတွေအကြောင်း ရင်ဖွင့်တက်သည်။ ဆွေဆွေမှာ အပျိုမစစ်တော့ပေ။ ကျောင်းတက်စဉ် တွဲခဲ့သော ရီးစားက သူမ၏ အပျိုရည်ကို စွတ်ခြူသွားခဲ့ပြီး ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် သူမသည် အနည်းငယ် အတင့်ရဲသည်။ မန္တလေးမှ ရီးစားထံ တစ်လ တစ်ကြိမ် ကျောင်းပိတ်ရက်များတွင် သွားတွေ့သလို နောင်ချိုမှ ရီးစားနှင့်လည်း အခွင့်သင့်တိုင်း တွေ့ဖြစ်သည်။ သူမ၏ ရီးစားများနှင့် တွေ့ပြီး ပြန်လာတိုင်း သူမ၏ ရီးစားများက ဘယ်လို အပြုအစု ကောင်းကြောင်း ဖြူဖြူ့အား ပြောပြသည်။ အစပိုင်း နားရှက်သော်လည်း နောက်ပိုင်းတွင် နားထောင်ရတာ အရသာ ရှိသလို ခံစားရသည်။ ကိုအောင်နိုင်တို့ လင်မယားမှာ အနေအေးကြသော်လည်း ညတိုင်း ကာမ ဆက်ဆံကြသည်။ အခန်းခြင်း ကပ်နေသဖြင့် သူတို့ ဆက်ဆံနေသည့် အသံကို ခပ်သဲ့သဲ့ ကြားနေရသည်။ ကိုအောင်နိုင်တို့ လင်မယား ဆက်ဆံတိုင်း ဆွေဆွေက အခန်းထဲမှ ချောင်းကြည့်နေကြပင်။ ဖြူဖြူ့အား ကြည့်ရန် အဖေါ်ခေါ်သော်လည်း အပျိုဖျန်းလေးမှာ ရှက်၍ မကြည့်ဖြစ်ပေ။ ယခုလည်း ရောက်တက်ရာရာ စကားပြောကြရင်း တစ်ဖက်ခန်းမှ အသံများ ကြားရသဖြင့် “ဟော၊ ကိုအောင်နိုင်ကြီး ဇာတ်လမ်း စပြီ ဖြူရေ။ ချောင်းကြည့်ရအောင်” “ကိုယ့်ဖါသာကို ကြည့်ပါ ဆွေရယ်၊ ဖြူဖြင့် မကြည့်ရဲပေါင်” “ဒါဆို ဆွေ ကြည့်လိုက်ဦးမယ် ဟဲဟဲ” ဆွေဆွေသည် ပြက္ခဒိန်ကို ဖယ်လိုက်ရာ အသင့် ဖေါက်ထားသော အပေါက်တစ်ခု ပေါ်လာသည်။
ရောက်ကာစက ထိုအပေါက်မှာ အနည်းငယ် သေးပြီး နောက်ပိုင်းတွင် ကျယ်လာသယောင် ထင်မိသည်။ ဆွေဆွေ့အတွက်မူ ထို ချောင်းပေါက်လေး ကျယ်သည်က ပို၍ မြင်ကွင်း ရှင်းသဖြင့် သဘောကျသည်လေ။ တစ်ဖက်ခန်းမှ ကိုအောင်နိုင်၏ စောင့်ချက်တွေ ပြင်းထန်လှသည်။ တစ်ဗျွတ်ဗျွတ် တစ်ဗွတ်ဗွတ်နှင့် အသံများ ကြားနေရသည်။ ငြိမ်ငြိမ်လေး ချောင်းကြည့်နေရင်း 15 mins ခန့်ကြာသော် ဆွေဆွေသည် ချောင်းကြည့်နေရာမှ မျက်လုံးကို ခွါက ဖြူဖြူ့အနီး တိုးကပ်လာပြီး “ကိုအောင်နိုင်ကြီး နွှာချက်က အားရစရာကြီး ဖြူရာ၊ ဒီလူ တော်တော်ထန်တဲ့လူဘဲ၊ မဝေဆို တစ်ကိုယ်လုံး ခါရမ်းနေတာ အဟေးးး” “ကဲ ဆွေ အိပ်စို့၊ မနက် မထနိုင်ဘဲ နေလိမ့်မယ်” “Ok ok အဟီး” အိပ်ရန် မီးမှိတ်ပြီးမကြာခင် ဆွေဆွေ၏ ကုတင်လေး လှုပ်နေသဖြင့် မသိမသာလေး ကြည့်မိရာ ဆွေဆွေသည် နို့တွေကို အင်္ကျီပေါ်မှ နေ၍ သူမဖါသာ စုပ်ကိုင်ပြီး လက်တစ်ဖက်က ပေါင်ကြားထဲ ရောက်နေသည်ကို တွေ့ရသည်။ ဆွေဆွေသည် ကိုအောင်နိုင်၏ လီးကြီးကို မျက်လုံးထဲ မြင်ယောင်ကာ စောက်ဖုတ်ကို ပွတ်ရင်း နို့အုံကို စုပ်နယ်၍ အာသာဖြေနေခြင်း ဖြစ်သည်။ “အ အ အ အ အားးးးးး” စနေနေ့ ကျောင်းပိတ်ရက် ဖြစ်သဖြင့် ဆွေဆွေသည် မနက် အစောပိုင်းကားဖြင့် မန္တလေးသို့ ဆင်းသွားသည်။ ဖြူဖြူလည်း အဝတ်အစားများ လျှော်ဖွတ်ပြီး အခန်းထဲတွင် စာအုပ် ဖက်နေစဉ် “အို ကိုအောင်ကလည်း နေ့ခင်းကြီးကို” “အော် မိန်းမရယ်၊ ကိုယ့် မိန်းမကို လိုးတာ နေတွေ့ ညတွေ ရွေးစရာ လိုလို့လား” “ရှင့်ဟာကလည်း တကတည်း မပြောခြင်ဘူး ဟွန့်” “ငါ့မိန်းမလေး ရေချိုးပြီးအလှကို မြင်လိုက်ရတော့ မနေနိုင်လို့ပါကွ အဟဲ” “ဖြည်းဖြည်းတော့ လုပ်နော်၊ ဟိုဘက်ခန်းက ကြားရင် ရှက်စရာကြီး” “မကြားပါဘူး မိန်းမရာ လာစမ်းဘာ” “အိုးးးး” ကိုအောင်နိုင်ကသာ မကြားရဘူး ပြောနေသည်။
အသံတွေ ကြားနေရသည်။ “အ ကိုအောင် ဘယ်လို လုပ်နေတာလည်းရှင် ရှီးးးး အိုးးးး” ထိုအသံများကြောင့် ဖြူဖြူသည် စာဖတ်ရာတွင် စိတ်မရောက်တော့ပေ။ တရေးအိပ်ရန် စဉ်းစားသော်လည်း မရ။ တစ်ဖက်အခန်းမှ အသံကို နားစွန့်ရင်း ကိုအောင်နိုင်ကြီး မဝေကို မည်ကဲ့သို့ လုပ်နေမှန်း သိခြင်လာသည်။ ခါတိုင်း ဆွေဆွေရှိသဖြင့် ကြည့်ရမှာ ရှက်သလို ဖြစ်နေသော်လည်း၊ ဒီကနေ့ တစ်ယောက်ထဲ ဖြစ်နေသဖြင့် စာအုပ်ကို ချလိုက်ပြီး ဆွေဆွေ့ကုတင်ဘက် အသာလေး သွားလိုက်သည်။ ပြီးနောက် ပြက္ခဒိန်ကို ဖယ်ကာ ချောင်းကြည့်ပေါက်နား မျက်လုံးကို ကပ်ကြည့်လိုက်ရာ “အိုးးးးးး” ကိုအောင်နိုင်ရော မဝေပါ အဝတ်များ မပါတော့ပေ။ ကိုအောင်နိုင်က မဝေ၏ ပေါင်ကြား ခေါင်းငုံ့ကာ မဝေ၏ စောက်ဖုတ် ဖေါင်းဖေါင်းကြီးကို ကုန်း လျှက်နေသည်။ အပျိုဖြန်းလေး ကတုန်ကယင် ဖြစ်သွားသည်။ အထီးအမ ကာမဆက်ဆံခြင်းကို ကြားဖူးသော်လည်း အခုမှ မျက်ဝါးထင်ထင် တွေ့မြင်ရခြင်း ဖြစ်သည်။ ကိုအောင်နိုင်တို့က ဖြူဖြူချောင်းကြည့်နေသော အပေါက်ကို ကျောပေးထားသည်။ မဝေက ကိုအောင်နိုင်၏ ဆံပင်ကို လက်ဖြင့် ထိုးစွကာ ခါးကို ကော့ကော့ပေးရင်း အဖျားတက်သလို တဟင်းဟင်းနှင့် ညည်းညူနေသည်။ “အ အ ပြီးတော့မယ် ပြီးတော့မယ်အ အ အ အ အားးးးးး ရှီးးးးးးး ဟားးးးး” မဝေ၏ တကိုယ်လုံး တစက်စက် တုန်ကာ ကိုအောင်နိုင်၏ ခေါင်းကို သူမ စောက်ဖုတ်နှင့် ဖိကပ်ထားရင်း တစ်ချီ ပြီးသွားသည်။ အောင်နိုင်သည် မဝေ၏ ပေါင်ကြား ဒူးထောက် ထိုင်လိုက်သည်။ ကိုအောင်နိုင်၏ လီးကြီးမှာ သူမ၏ လက်တစ်စုပ်ခန့် တုတ်ပြီး 6″ နီးပါး ရှည်သည်။ လီးကိုကိုင်ကာ စောက်ဖုတ်တွင် တေ့လိုက်ပြီး စောင့်သွင်းလိုက်သည်။
“အင့် ဗျွတ် ဗျွတ် ဗွတ် ဗွတ် အားးးး ကောင်းလိုက်တာ ကိုအောင်ရယ် စောင့် စောင့် ဗျွတ် ဗျွတ် ဗွတ် ဗွတ် အိုးးးးး” စောက်ဖုတ်ထဲ လီးကြီး ဝင်ထွက်နေသည်ကို အထင်းသား တွေ့မြင်နေရသည်။ ကိုအောင်နိုင်၏ စောင့်ချက်တွေကလည်း တဖျောင်းဖျောင်းနှင့် အားပါလှသည်။ မဝေကလည်း ကိုအောင်နိုင်၏ လက်မောင်းနှစ်ဖက်ကို ကိုင်ကာ အောက်မှ ကော့ကော့ပေးသည်။ မြင်ကွင်းက ဖြူဖြူ့အား ညှို့ယူထားသလို မျက်စိ မခွါနိုင်ပေ။ ကြည့်နေရင်း ဘာကြောင့်မှန်းမသိ၊ နို့အုံနှစ်ဖက်လုံး တင်းလာပြီး စောက်ဖုတ်ထဲမှ အရည်များ စိမ့်ထွက်လာသည်။ 15 mins ခန့် ကြာသော် ကိုအောင်နိုင်၏ စောင့်ချက်တွေ သွတ်လာပြီး ” ဗျိ ဗျိ ဗျစ် ဗျစ် အ အ အ အ ဖတ် ဖတ် ဖတ် ဖတ် ဗျွတ် ဗျွတ် ဗွတ် ဗွတ် အ အ အ အ အားးးး ရှီးးးးး ဟားးးးးး” ကိုအောင်နိုင်သည် မဝေအပေါ် လဲကျသွားပြီး ဆန့်ငင် ဆန့်ငင်နှင့် တချီ ပြီးသွားသည်။ ထိုအချိန်အထိ ဖြူဖြူ ချောင်းကြည့်နေစဲပင်။ ခဏကြာသော် ကိုအောင်နိုင်သည် မဝေအပေါ် မှိန်းနေရာမှ ထလာပြီး ရေ ထသောက်သည်။ ရေအိုးစဉ်က ဖြူဖြူ ချောင်းကြည့်နေသော အပေါက်နားမှာ ဖြစ်သဖြင့် စောက်ရည်များ စိုနေသော လီးကြီးကို အထင်းသား မြင်လိုက်ရသည်။ ဒစ်ကြီးမှာ ပြဲလန်ကာ အရည်များ လဲ့နေသည်။ အရွယ်ရောက်ပြီး ယောက်ျားတစ်ယောက်၏ လီး ဆိုတာကို ယခုမှ မြင်ဖူးခြင်း ဖြစ်သည်။ ဖြူဖြူသည် အကြည့်ကို ခွါကာ မိမိ၏ ကုတင်ဘက်သို့ ပြာပြာသလဲ ကူးလိုက်သည်။ တဖက်ခန်းမှ အသံသဲ့သဲ့ ကြားလိုက်သဖြင့် အောင်နိုင် ပြုံးလိုက်သည်။ ဒီကနေ့ ဆွေဆွေ မန္တလေးကို ဆင်းသွားမှန်း သိသည်။ ဒါဆို အခု ချောင်းကြည့်နေတာ ဖြူဖြူ ဖြစ်ရမည်။ ယခင်က ဒီအပေါက်မှာ ကျဉ်းကျဉ်းလေး ဖြစ်သည်။ ဆွေဆွေ ချောင်းကြည့်နေမှန်း ရိပ်မိသဖြင့် အပေါက်ကို ချဲ့လိုက်သည်။ ပြီးနောက် ရေအိုးစဉ်ကို ထိုအပေါက်နား ရွှေ့လိုက်သည်။ မဝေကို လိုးပြီးတိုင်း လီးတန်းလန်းနှင့် ရေ ထထ သောက်ခြင်းမှာ တစ်ဖက်မှ ချောင်းကြည့်နေသူသည် သူ၏လီးကို မြင်စေရန် တမင် ဖန်တီးခြင်း ဖြစ်သည်။
ဆွေဆွေ့အား တစ်နေ့နေ့တွင် ရအောင် လုံးမည်ဟု ကြံစည်ထားသည်။ ဒီကောင်မလေးက ဇ ရှိပြီးသားမှန်း အောင်နိုင် သဘောပေါက်ထားသည်လေ။ ယခုတော့ သူတို့ လင်မယား လိုးတာကို ချောင်းကြည့်သူမှာ ဆွေဆွေ တစ်ဦးတည်း မဟုတ်တော့ဘဲ ဖြူဖြူပါ ပါလာပြီ။ ညနေ ဖြူဖြူ အပြင်သွားချိန်မှ မဝေမသိအောင် ခြေရင်းက အပေါက်ကို ချဲ့ထားလိုက်မယ်ဟု တွေးမိသည်။ ဖြူဖြူသည် ကုတင်ပေါ် လှဲကာ မျက်စိ မှိတ်လိုက်သော်လည်း ကိုအောင်နိုင်၏ လီးကြီးနဲ့ မဝေကို လိုးနေပုံမှာ မျက်လုံးထဲက မထွက်ပေ။ သူမ၏ စောက်ဖုတ်ထဲမှလည်း ချွဲကျိကျိ အရည်များ စိမ့်ထွက်နေသဖြင့် စမ်းကြည့်လိုက်သည်။ အပျိုဖေါ် ဝင်ကတည်းက ခုချိန်ထိ အပြင်သွားချိန်၊ စာသင်ချိန်နှင့် ရာသီသွေး ဆင်းချိန်မှလွဲ၍ ကျန်အချိန်များတွင် အောက်ခံဘောင်းဘီ မဝတ်တက်သော အကျင့်ရှိသည်။ ထို့ကြောင့် အောက်ခံမပါသဖြင့် ထမိန်တွင် အကွက်လိုက် စိုနေပြီ။ ထမိန်စကို ဖြည်လျှော့ကာ လက်လျှိုပြီး စောက်ဖုတ်လေးကို စမ်းကြည့်လိုက်ရာ တစ်ချက် တွန့်သွားသည်။ နောက်တော့ ကိုင်၍ ကောင်းသဖြင့် အသာလေး ပွတ်ရင်း ပွတ်ရင်း အနည်းငယ် ကြာသောအခါ လူတစ်ကိုယ်လုံး ဓါတ်လိုက်သလို ဖြစ်ပြီး စောက်ဖုတ်ထဲမှ အရည်များ ညှစ်ထွက်လာသည်။ “အ အ အ အ ရှီးးးးး” ကတုန်ကယင်ဖြစ်ပြီး မောဟိုက်စွာဖြင့် အိပ်ပျော်သွားသည်။ ညပိုင်းတွင်လည်း မဝေ၏ ညည်းညူသံ ကြားရသည်နှင့် ဆွေဆွေ့ကုတင်ပေါ် တက်ကာ ချောင်းကြည့်ဖြစ်သည်။ အောင်နိုင်ကလည်း တနင်္ဂနွေ နေ့လည်ရော ညပါ မဝေအား လိုးသည်။ ဖြူဖြူလည်း အလွတ်မခံ ချောင်းကြည့်သည်။ မနက်ဖန် တနင်္လာနေ့ဆိုလျှင် ဆွေဆွေ ပြန်ရောက်ပြီ။ ဒါဆို သူမ ဘယ်အပေါက်က ကြည့်ရပ။ နံရံကို ဟိုဒီ ကြည့်မိစဉ် “ဟယ် ခြေရင်းဘက်မှာ အပေါက် တစ်ပေါက်” ဖြူဖြူ ပြုံးရင်း သူမ၏ ကုတင်ပေါ်လှည်းကာ စောက်ပတ်ကို စွပြီး အိပ်ပျော်သွားတော့သည်။
ကျောင်းအားချိန်များတွင် ကျောင်းစောင့် အိမ်ထဲ၌ မဝေ၊ ဆွေဆွေနှင့် ဒေါ်အေးတို့ စကား ဖေါင်ဖွဲ့တက်သည်။ ဖြူဖြူက ရံဖန် ရံခါမှသာ ပါသည်။ မဝေနှင့် ဒေါ်အေးတို့က အိမ်ထောင်သည် ပီပီ လင်မယားများအကြောင်း ပြောဖြစ်တာ များသည်။ ပညာပေးလိုလို ဘာလိုလိုနှင့် ပြောရင်း ပြောရင်း သူ့ယောက်ျား ကိုယ့်ယောက်ျား ဘယ်လို အပြုအစုကောင်းကြောင်း ကြွားကြ ပြောကြသည်က များသည်။ အစပိုင်းတွင် ဆင်စာဖျက်၍ ပြောကြသော်လည်း နောက်ပိုင်းတွင် ပွင့်လင်းလွန်းလာသည်။ ဆွေဆွေကလည်း သူမ၏ အတွေ့အကြုံများကို ဝင်ရောက် ပြောကြားတက်သည်။ ထိုအခါ အပြာဇာတ်လမ်းအား နားထောင်ရသလိုပင် ဖြစ်သည်။ ဒေါ်အေးက သူ့ယောက်ျား ကိုမြမောင်မှာ ယခုအချိန်ထိ လူငယ်လို သန်မာကြောင်း၊ ထိုသို့ သန်မာအောင်လည်း ဆေးဝါး မှီဝဲကြောင်း ပြောကာ ကိုအောင်နိုင် အတွက်ပင် ဆေးဝါး ပေးလိုက်သေးသည်။ ဖြူဖြူကတော့ နားထောင်ရုံ သက်သက်ပင် ဖြစ်သည်။ သူတို့၏ စကားဝိုင်းကို မသိမသာ ချောင်း၍ နားထောင်နေတက်သူမှာ ကိုမြမောင် ဖြစ်သည်။ သူ့မိန်းမ ဒေါ်အေးနှင့် မဝေတို့ ပြောနေသော ကာမဆက်ဆံမှုများအား အပျိုလေးနှစ်ယောက် နားထောင်နေသည်ကို သဘောကြလှသည်။ မဝေ၏ စွန့်ကားသော ဖင်ကြီးကို ပစ်မှားရသည်မှာ အကြိမ်ကြိမ်၊ ဆရာမလေး ဖြူဖြူနှင့် ဆွေဆွေကို မျက်လုံးထဲ မြင်ယောင်ပီး သူ့မိန်းမကို လိုးရသည်မှာ အခါခါပင်။ တစ်နေ့နေ့တော့ ဒင်းတို့ကို စားရအောင် ကြံဦးမှဘာ။ ဖြူဖြူ့တွင် ယခင်က စစ်ဗိုလ်တစ်ဦးနှင့် ရီးစား ဖြစ်ဖူးသည်။ ထို စစ်ဗိုလ်က သူမအား တည်းခိုခန်းသို့ date သည်ကို မနှစ်မြို့သဖြင့် အဆက်ဖြက်လိုက်သည်။ ယခုအခါ ကိုမြတ်သူဆိုသော လူတစ်ယောက်နှင့် ရီးစား ဖြစ်နေသည်။
သမီးရီးစား သက်တန်းတစ်လျှောက်တွင် သန့်သန့်ရှင်းရှင်း တွဲလိုသည်က ဖြူဖြူ၏ ဆုံးဖြက်ခြက်ပင် ဖြစ်သည်။ ဆရာမ ဒေါ်နွယ်နွယ်၏ တာဝန်သည် စာသင်ပေးရုံမျှမက ရုံးပိုင်ဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းများကိုလည်း တာဝန်ယူရသည်။ ရုံးကိစ္စများအား အိမ်တွင် လုပ်သည်က များသည်။ ဆွေဆွေနှင့် ဖြူဖြူသည် ရုံးကိစ္စ ဆောင်ရွက်ရန် ရှိလျှင် ဒေါ်နွယ်နွယ်၏ အိမ်သို့ လိုက်သွားရသည်။ ဒေါ်နွယ်နွယ်၏ အိမ်သို့ ရောက်လျှင်လည်း ကိုအိုက်စံသည် မထိခလုပ် ထိခလုပ် ပြောတက် နောက်တက်သည်။ ဆေးခြောက်ရှူသူပီပီ စကားကြွယ်သဖြင့် ကိုအိုက်စံအား ခင်မင်မိကြသည်။ ဆွေဆွေနှင့် ဆိုလျှင် စရင်းနောက်ရင်း ခေါင်းပုတ် ဖင်ပုတ် လုပ်တက်သေးသည်။ ဖြူဖြူကိုတော့ အနေအေးသဖြင့် မစရဲပေ။ စနေနေ့တစ်ရက်တွင် ဒေါ်နွယ်နွယ်ထံသို့ စာရင်းများပေးရန် ဖြူဖြူ တစ်ယောက်တည်း ထွက်ခဲ့သည်။ ဆွေဆွေက အဝတ်များ လျှော်ရန် နေခဲ့သည်။ မိုးအုံ့နေသဖြင့် ဆိုင်ကယ်ကို မြန်မြန်မောင်းခဲ့သည်။ ဒေါ်နွယ်နွယ်တို့အိမ် ရောက်ခါနီးမှ မိုးက သဲကြီးမဲကြီး ရွာချလိုက်သည်။ ဖြူဖြူ့တစ်ကိုယ်လုံး မိုးရေတွေ ရွှဲသွားသည်။ စာရွက်စာတန်းများအား ကျွတ်ကျွတ်အိတ်နှင့် ထုတ်လာ၍သာ တော်သေးသည်။ ဒေါ်နွယ်နွယ်၏ အိမ်သို့ အရောက်တွင် ဆေးတံရှိုက်နေသော ဦးအိုက်စံကိုသာ တွေ့ရသဖြင့် “ဦးအိုက်စံ ဆရာမရော” “ဟေမနက်ကတည်းက မဝေနဲ့ မန္တလေးကို ဆင်းသွားတာ နင်တို့ကို မပြောဘူးလား” “ဟင်းးး ဒီလိုမှန်းသိရင် မလာပါဘူး၊ ဘယ်အချိန် ပြန်ရောက်မှာလည်း” “ညနေ မိုးချုပ်လောက်မှ ရောက်မှာဟ” “ဒါဆို ဒီ စာရွက်တွေ ထားခဲ့လိုက်မယ်” “ပြန်တော့မလို့လား ကောင်မလေး၊ မိုးတွေ တအား သည်းနေတယ်လေ” ဦးအိုက်စံ ပြောသလိုပင်၊ မိုးသည်းချက်က တဝေါဝေါ ရွာပြီး မိုးများ ချိန်းကာ နေ့ခင်းပင် မှောင်မိုက်သွားသည်။ “ဆိုင်ကယ်မောင်းလို့ ရမှာမဟုတ်ဘူး ကောင်မလေး။
မိုးစဲမှ ဖြေးဖြေးပြန်၊ အန္တရာယ် များတယ်” ဦးအိုက်စံသည် မိုးရေ ရွှဲနေသော ဖြူဖြူ၏အား စိုက်ကြည့်နေသည်။ အဝတ်များ စို၍ ခန္ဓာကိုယ်တွင် ကပ်နေရာ ရှိုက်ဖိုကြီးငယ် အသွယ်အသွယ်ကို အထင်းသား မြင်နေရသည်။ ကြည့်နေရင်း လီးက တောင်လာသည်။ ဖြူဖြူကတော့ အပြင်ကိုငေးရင်း ဘာလုပ်ရမှန်း ဝေခွဲ၍ မရပေ။ “ကဲ ဖြူဖြူ ၊ ဒီအတိုင်း နေရင် အအေးပတ်လိမ့်မယ်၊ ညည်းအမ အဝတ်တွေ လဲထားလိုက်” ဟုတ်သည်။ သူမ တကိုယ်လုံးလည်း ခိုက်ခိုက် တုန်နေပြီ။ သို့သော် အိမ်တစ်ခုလုံးတွင် ဦးအိုက်စံနှင့် သူမ နှစ်ယောက်ထဲဟူသော အသိကြောင့် လန့်နေမိသည်။ ဒီအတိုင်း နေလျှင်လည်း ဖျားလိမ့်မယ်။ မိုးက ဘယ်အချိန်မှ ရပ်တန့်မည် မသိပေ။ နောက်ဆုံး အဝတ်လဲရန် ဆုံးဖြက်လိုက်ပြီး “ဟုတ်ကဲ့ ဦးအိုက်စံ” “သွား အခန်းထဲက ဘီရိုထဲမှာ သင့်ရာ တစ်စုံ လဲထားလိုက်” ဖြူဖြူလည်း အခန်းထဲ ဝင်ကာ အခန်းတံခါးကို ဂျက်ထိုးလိုက်သည်။ ဂျက်က ကျပ်နေသဖြင့် စေ့ရုံသာ စေ့လိုက်ပြီး ဘီရိုထဲရှိ သူမနှင့် သင့်တော်မည် အဝတ်အစားကို ရွေးလိုက်သည်။ ဦးအိုက်စံသည် ဆေးခြောက် ရှိုက်နေရာမှ ထလာပြီး အခန်းတံခါးပေါက် လက်ကိုင် အပေါက်မှ အတွင်းသို့ ချောင်းကြည့်နေသည်။ သူမနှင့် သင့်တော်မည့် အဝတ်များ ရွေးပြီးနောက် ထမိန်ကို အရင်လဲကာ ရင်လျှားလိုက်သည်။ ပြီးမှ အင်္ကျီနှင့် ဘော်လီကို ချွတ်လိုက်သည်။ အောင်ခံဘောင်းဘီ ချွတ်တာတော့ မတွေ့မိပေ။ ဦးအိုက်စံသည် လိုခြင်သော အနေအထားသို့ ရောက်သည်နှင့် တံခါးကို အသာ တွန်းဖွင့်ကာ အခန်းထဲသို့ ဖွဖွလေး ဝင်လိုက်သည်။ မိုးသံ လေသံနှင့်မို့ ဖြူဖြူ သတိမထားမိပေ။ ရင်လျှားထားသော မိန်းမပျိုလေးတစ်ယောက် မိမိ၏ အိပ်ခန်းထဲ ရောက်နေသည်ဟူသော အသိကြောင့် အိုက်စံ၏ လီးကြီး တောင်မက်လာသည်။ ဖြူဖြူသည် ကုတင်ပေါ်မှ အကျီ င်္ကို ကုန်းပြီး ယူလိုက်စဉ် အိုက်စံအား ဖင်ကုန်းပြသလို ဖြစ်သွားသည်။ အိုက်စံလည်း ပုဆိုးကို ချွတ်ချလိုက်သည်။
အရှည် 6″ ခန့်၊ လုံးပတ်မှာ လက်တစ်စုပ်မက ရှိသော လီးကြီးကို တံတွေးစွတ်လိုက်သည်။ “ဝုန်းးးး ဒလိန်း လိန်း လိန်း ဂျိန်း ဂျိန်းးးးးးး” မိုးကြိုးပစ်သံကြောင့် ဖြူဖြူ လန့်သွားစဉ် အနောက်မှ သူမအား တွန်းလှဲခံလိုက်ရသည်။ “အ အမေ့” ကုတင်ပေါ် မှောက်လျှက်ဖြစ်သွားသော ဖြူဖြူအပေါ် တက်ဖိလိုက်သည်။ “အို ဦးအိုက်စံ ရှင်ရှင် ဒါ ဘာလုပ်တာလည်း” အိုက်စံသည် စကားတစ်ခွန်းမှ မပြောဘဲ ဖြူဖြူ၏ ထမိန်ကို ဆွဲလှန်လိုက်သည်။ အောက်ခံဘောင်းဘီ ဝတ်မထားသဖြင့် ဖွေးဥနေသော ဖင် လုံးလုံးလေး ပေါ်လာသည်။ “ရှင် မယုတ်မာနဲ့နော်၊ ကျွန်မ အော်လိုက်မှာနော်” “အော်လေ၊ ကြိုက်သလောက် အော်စမ်း၊ နင့်အသံ ဘယ်သူမှ မကြားဘူးကွ” “ရှင် ရှင် လူယုတ်မာ!! လွှတ် လွှတ် ကျွန်မကိုလွှတ်” “ဗျိ ဗျိ ဇွိ ဇွိ အားးး” ရုန်းရင်း ကန်ရင်းနှင့် အိုက်စံသည် စောငက်ပတ်ကို လီးနှင့်တေ့ကာ ဖိသွင်းလိုက်ရာ ဒစ် ဝင်သွားသည်။ “မလုပ်နဲ့ မလုပ်ပါနဲ့ရှင် အီး ဟီးးး ဟီးး ဟီးးး” “ဗလစ်တစ်တစ် ဗျစ် ဗျစ် ဗျစ် အားးးးးး” တွန်းထိုး ရုန်းကန်နေသော ဖြူဖြူ၏ ဂုတ်ကို ဖိထားလိုက်ပြီး ဝင်လက်စ လီးကို စောင့်သွင်းလိုက်ရာ တစ်ဝက်နီးပါးခန့် ဝင်သွားသည်။ အပျိုစစ်စစ် စောက်ဖုတ်လေးမှာ နာကျင်သွားသည်။ ဖြူဖြူသည် မုဒိန်းကျင့်ခံနေရသဖြင့် ကမ္ဘာပျက်မတက် ကြောက်လန့်နေသော်လည်း ဦးအိုက်စံ၏ သန်မာသော လက်များကြောင့် ရုန်းကန်၍ မရပေ။ လီးကို အနည်းငယ် ဆွဲထုတ်ကာ စောင့်သွင်းလိုက်သည်။ “အင့် ဗျွတ် ဗျွတ် ဗွတ် ဗွတ် ဒုတ် အားးးးးး သေပါပြီ အမေရဲ့ အီးးး ဟီးးး ဟီးးး နာတယ် နာတယ်” လီးဒစ်သည် အပျိုမှေးကို ရက်ရက်စက်စက် ထိုးခွဲကာ သားအိမ်ကို ပြေးစောင့်သဖြင့် ဖြူဖြူ မီးပွင့်မတက် ပူထူပြီး နာကျင်သွားသည်။ လီးကို ဒစ်မြုတ်ရုံ ပြန်ဆွဲထုတ်လိုက်ရာ လီးတစ်ချောင်းလုံး သွေးများ ရဲနေသည်။ ခါးကို အားစိုက်ကာ အဆုံးထိ စောင့်သွင်းလိုက်သည်။
“ဗျွတ် ဗျွတ် ဗွတ် ဗွတ် အူးးး ဟူးးး ဟူးးး သေပါပြီ အမေရဲ့ ဗျိ ဗျိ ဗျစ် ဗျစ် အားးးးးး” အိပ်ယာခင်းအား လက်သီးစုပ်ကိုင်ကာ ခေါင်း ဘယ်ညာရမ်းရင်း ဦးအိုက်စံ၏ မညှာမတာ စောင့်လိုးချက်တွေကို လှိမ့်ခံနေရသည်။ နာကျင်မှုကြောင့် မျက်ရည်များ ဖြိုင်ဖြိုင်ကျကာ အိပ်ယာခင်းတွင် ရွှဲနေသည်။ “ဗျွတ် ဗျွတ် ဗွတ် ဗွတ် အားးးးး ဇွိ ဇွိ ဗျစ် ဗျစ် အားးးးးးး” ဖြူဖြူ၏ စောက်ဖုတ်လေးမှာ ကျင်းမြောင်း ကျပ်ထုတ်နေရာ စီးစီးပိုင်ပိုင်နှင့် လိုးရတာ အရသာ ရှိလှသည်။ ဦးအိုက်စံ၏ စောင့်ချက်တွေ ပြင်းထန်လှသဖြင့် ဖြူဖြူမှာ နာကျင်လွန်း၍ 15 mins ခန့် ကြာသော သတိလစ်သလို ဖြစ်ကာ မလှုပ်နိုင်တော့ပေ။ စောင့်လိုးတာ ရပ်လိုက်ပြီး လီးကို ထုတ်လိုက်သည်။ ပြီးနောက် ဖြူဖြူ၏ ခန္ဓာကိုယ်အား ပတ်လတ်လှန်လိုက်ကာ ထမိန်ကို ကွင်းလုံးချွတ်လိုက်သည်။ ဖြူဖြူ၏ အမွှေးသန်လှသော စောက်ဖုတ်လေးမှာ ယောင်ကိုင်းကာ သွေးများ ခြင်းခြင်းနီနေသည်။ ဟင်းရည်သောက် ပန်းကန်အသေးခန့်ရှိသော နို့လေးများမှာ လုံးဝန်း မာကျစ်နေသည်။ နို့လေးများအား တစ်ဖက်စီ စို့ကာ လက်ဖြင့် စိန်ပြေနပြေ စုပ်နယ်နေသည်။ အနည်းငယ် ကြာသောအခါ ဖြူဖြူ သတိယလာသည်။ သတိယခြင်း သူမ၏ နို့ကို စို့နေသော ဦးအိုက်စံ၏ အဆီတဝင်းဝင်းနှင့် မျက်နှာအား တွေ့လိုက်ရသဖြင့် ဝမ်းနည်း ဒေါသထွက်ကာ ဦးအိုက်စံ၏ ခေါင်းကို တွန်းဖယ်ရင်း “လူယုတ်မာကြီးးးး အီးးး ဟီးးး ဟီးးးး ရှင့်ကို မုဒိန်းမှုနဲ့ တရားဆွဲမယ် အီးးး ဟီးးး ဟီးးးး” “ဟားးးး ဟားးး ဟားးး ဟားးးး ဆွဲလိုက်စမ်းပါ ဖြူဖြူရယ်၊ အဲ့လို ဆွဲရင် မင်းဘဲ အရှက်ကွဲမှာကွ” “ကွဲပစေ၊ ရှင်လို လူယုတ်မာကို ထောင်ထဲ ပို့ပစ်မယ် အီးးး ဟီးးး ဟီးးး” “ဒီမယ် ဖြူဖြူ၊ ငါ အခု မင်းကို လိုးနေတာ ငါ့ အိပ်ခန်းထဲမှာနော်၊ ပြီးတော့ မင်းဝတ်ထားတာ ငါ့မိန်းမရဲ့ ထမိန်၊ မင်း အဝတ်အစားတွေကို ဆေးစစ်ရင် ဘာမှတွေ့မှာမဟုတ်ဘူး၊ ပြီးတော့ မင်းက အရွယ်ရောက်ပြီးသား မိန်းမတစ်ယောက်လေ၊ ငါ့ကို ရဲက စစ်ရင်လည်း မင်းကိုယ်တိုင် ခံခြင်းလွန်းလို့ ငါ့အခန်းထဲထိ လာ ခံတာလို့ ပြောလိုက်ရင် ပြီးပြီ၊ အဲ့အချိန်မှ ငါ့မိန်းမက မင်းကို လင်ခိုးမှုနဲ့ ပြန်ဆွဲရင် ထောင်ကျမှာက မင်းကွ၊ ရှင်းလား” “ယုတ်မာလှချည်လား အီးးး ဟီးးး ဟီးးးး” ဦးအိုက်စံ၏ ချည်ပြီးတုတ်ပြီး အကွက်ကျကျ စီစဉ်မှုကြောင့် ဖြူဖြူ ဘာမျှ ပြန်မပြောနိုင်ပေ။
“ကဲ ဖြူဖြူ၊ ငါ့လီးက မင်းရဲ့ အပျိုမှေးကိုလည်း ခွဲပြီးသွားပြီ၊ အဲ့ဒီတော့ ခံလက်စနဲ့ ဆက်ခံလိုက်စမ်း၊ ငါ မင်းကို ကောင်းကောင်းကြီး လိုးပေးမယ်၊ ဟုတ်ပြီလား” “မလုပ်ပါနဲ့၊ မလုပ်ပါနဲ့တော့ ၊ အီးးး ဟီးးး ဟီးးး” ဦးအိုက်စံသည် ဖြူဖြူ၏ ခြေထောက်နှစ်ဖက်အား ပုခုံးပေါ်ထမ်းတက်လိုက်သည်။ ဒစ်ကို စောက်ဖုတ်တွင်တေ့ကာ ခါးကော့ သွင်းလိုက်သည်။ “ဇိ ဇိ ဇွိ အ “ ဒစ် ဝင်သွားသည်နှင့် ကိုယ်ကို ကိုင်းချလိုက်ပြီး ဖြူဖြူ၏ မျက်နှာဘေး လက်နှစ်ဖက် ထောက်လိုက်သည်။ ပြီးနောက် အားရပါးရ စောင့်သွင်းလိုက်သည်။ “အင့် ဗျွတ် ဗျွတ် ဗွတ် ဗွတ် အားးးးးးး” စောင့်ချက်က ပြင်းလွန်း၍ လီးကြီးမှာ တစ်ချက်တည်းနှင့် အဆုံးထိ ဝင်သွားပြီး သားအိမ်ကို ဝင်စောင့်သည်။ နာလည်းနာ၊ သားအိမ်လည်း အောင့်သွားသဖြင့် ဖြူဖြူ့ခေါင်းလေး မော့သွားကာ အော်ညည်းနေရသည်။ နာကျင်မှုကြောင့် ရှုံ့မဲ့နေသောဖြူဖြူ၏ မျက်နှာလေးကို အရသာခံကာ ကြည့်ရင်း လီးကို အဆုံးထိ ထုတ်လိုက်၊ စောင့်သွင်းလိုက်ဖြင့် စိန်ပြေနပြေ စောင့်စောင့် လိုးသည်။ ဦးအိုက်စံအတွက်မူ လိုးရတာ အရသာရှိသလောက် ဖြူဖြူ့ခမျာ ငယ်သံပါအောင် အော်နေရသည်။ မိမိ၏ ရီးစားပင် မထိခဲ့သော အပျိုစင်ဘဝလေး ခုတော့ ဦးအိုက်စံက အားရပါးရ စွတ်ယူနေပြီ။ အိမ်ထောင်သည်လည်းဖြစ်၊ ဘိန်းစားလည်း ဖြစ်သဖြင့် ထိန်း၍ လိုးနေရာ၊ စောက်ပတ်မှာ လီး အဝင်အထွက်ကို ကျင့်သားရလာပြီး ဖြူဖြူပင် သုံးချီခန့် ပြီးမှန်းမသိ ပြီးသွားသည်။ ဦးအိုက်စံမှာ မပြီးသေး။ စောက်ဖုတ်လည်း ပူထူကာ လူလည်း နုံးခွေနေပြီ။ နာရီဝက်ခန့်ကြာသော် ဦးအိုက်စံ၏ စောင့်ချက်တွေ ပြင်းထန်လာသည်။ “ဖတ် ဖတ် ဖတ် ဖတ် အ အ အ အ ဗျွတ် ဗျွတ် ဗွတ် ဗွတ် အ အ အ အ အားးးးး ရှီးးးးးး ဟားးးးး” လီးကြီး ဆန့်ငင် ဆန့်ငင် ဖြစ်ကာစောက်ခေါင်းထဲ ဦးအိုက်စံ၏ သုပ်ရည်များ ဝင်လာသည်။ ဖြူဖြူ၏ စောက်ပတ်လေးကလည်း လီးကြီးကို ညှစ်ကာ အရည်များ တစစ်စစ်နှင့် ထွက်သွားသည်။ သူမ လေးချီမြောက် ပြီးသွားခြင်း ဖြစ်သည်။ ဦးအိုက်စံသည် မောဟိုက်စွာဖြင့် ဖြူဖြူ့အပေါ် မှောက်ချလိုက်သည်။
ဖြူဖြူလည်း မသိစိတ်ကြောင့် ဖက်ထားမိသည်။ မိုးက သည်းကောင်းစဲပင်။5mins ခန့် မှိန်းပြီးသော် ဦးအိုက်စံသည် ကုတင်ပေါ်မှ ထလိုက်သည်။ ဖြူဖြူကတော့ ရမ်းတန်းရမ်းတန်း ဖြစ်နေသော ဦးအိုက်စံ၏ လီးကြီးကို ကြည့်ရင်း ကျန်ခဲ့သည်။ သူမ၏ စိတ်ထဲတွင် ကိုမြတ်သူကို သတိမရတော့ပေ။ ဆေးခြောက် အနည်းငယ် ရှူပြီး ဦးအိုက်စံ အခန်းထဲ ပြန်ရောက်လာသည်။ လက်ထဲ ပါလာသော wet tissue နှင့် သုပ်ရည်ရော၊ သွေးပါ ပေပွနေသည့် စောက်ဖုတ်လေးကို သုတ်ပေးလိုက်သည်။ “အ ရှီးးးး” “နာလို့လား ဖြူလေး” “စပ်လို့ အ အ ” Wet Tissue နှင့် သုတ်ပေးရင်း စောက်စိကို လက်မဖြင့် ကလိလိုက်ရာ ဖြူဖြူ့တစ်ကိုယ်လုံး ဓါတ်လိုက်သလို တွန့်သွားသည်။ နို့အုံလည်း တင်းလာကာ နို့သီးခေါင်းများ ချွန်လာသည်။ ဦးအိုက်စံသည် စောက်စိကို လက်မနှင့် ခက်သွတ်သွတ် ပွတ်ခါကာ လက်ညှိုးကို စောက်ပတ်လေးထဲ ထိုးမွှေလိုက်သည်။ “ဇိ ဇိ ဇိ ဇိ !!! အ အ အ အ !!!” စောက်ပတ်ထဲမှ အရည်များ စိမ့်ထွက်လာပြန်သည်။ ဖြူဖြူသည် နှုတ်ခမ်းတစ်ဖက် ဖိကိုက်ကာ အိပ်ယာခင်းအား လက်ပြန် စုတ်ထားရင်း မျက်လုံးမှိတ်၊ ခေါင်းမော့ပြီး ညည်းနေသည်။ စိတ်တိုင်းကျ စွပြီးနောက် ဖြူဖြူ၏ ပေါင်ကြား ဒူးထောက်ထိုင်လိုက်သည်။ ပြီးနောက် ဖြူဖြူ့ ဖင်ကို ဆွဲမလိုက်ပြီး လီးဒစ်ကို စောက်ဖုတ်တွင် တေ့လိုက်သည်။ ဒစ် ဝင်သည်နှင့် ခါးကိုကိုင်ကာ စောင့်သွင်းလိုက်သည်။
ကျောင်းတွင်လည်း ဆွေဆွေတစ်ယောက် မိုးတွေ အရမ်းရွာနေသဖြင့် လျှော်ပြီးအဝတ်များအား ကျောင်းဆောင်ပေါ်လှမ်းရန် ယူခဲ့သည်။ ခွေးခြေခုံပေါ် တက်ကာ ဝရံတာရှိ ကြိုးတန်းတွင် အဝတ်များ လှမ်းနေသော ဆွေဆွေ၏ ရေစိုကောက်ကြောင်းအလှကို အခန်းထဲမှ ငေးကာ ကိုအောင်နိုင်တစ်ယောက် လီးတောင်နေသည်။ ဒီလို မိုးအေးအေးနဲ့ဆိုလျှင် မဝေနှင့် တွယ်ရလျှင် ဇိမ်ဘဲဟု တွေးတောမိသည်။ ဒီကနေ့မှ မဝေသည် ဆရာမ ဒေါ်နွယ်နွယ်နှင့် မန္တလေးသို့ ဆင်းသွားသည်။ ထိုသို့ တွေးနေစဉ် “အ အမေ့ ဝုန်းးး အားးး” ဆွေဆွေတစ်ယောက် ခွေးခြေပေါ်မှ နောက်ပြန် ဆင်းလိုက်ရာ ခြေချော်ပြီး လဲကျသွားသည်။ ကိုအောင်နိုင်သည် အခန်းထဲမှ ပြေးထွက်ကာ ဆွေဆွေအား ဂျိုင်းမှ မ ထူပေးလိုက်သည်။ “ရလား ဆွေဆွေ ၊ ဖြေးဖြေးထ” “ဟုတ် ကိုအောင်နိုင် ကျးဇူး” “ဝုန်းးး အားးး နာတယ် နာတယ် အားးး” ခြေခေါက်ကာ လဲကျသွားပြန်သည်။ “အားးး ကျွတ် ကျွတ် ကျွတ် ၊ ခြေကျင်းဝတ် လည်သွားတယ်ထင်တယ်၊ တအား နာတာဘဲ” “ကဲ ဆွေဆွေ၊ ကိုအောင်နိုင် အခန်းထဲထိ ပို့ပေးမယ် ဟုတ်ပြီလား” “ဆွေက အားနာလို့ပါ” “လုပ်ဖေါ်ကိုင်ဘက် မောင်နှမတွေဘဲ၊ ဘာမှ အားနာစရာ မလိုဘူး ထ” ကိုအောင်နိုင်သည် ဆွေဆွေ့ဂျိုင်းအောက် သူ့ပုခုံး လျှိုကာ ဆွဲထူလိုက်သည်။ ဆွေဆွေလည်း အလိုက်သင့် ထ လိုက်သည်။ ဆွေဆွေ လဲကျသွားသည်ကို ရေထွက်မြောင်း ရှင်းနေသော ကိုမြမောင် လှမ်းမြင်လိုက်သည်။ ကိုအောင်နိုင် တွဲခေါ်သွားသည်ကိုလည်း မြင်လိုက်သည်။ ထို့ကြောင့် ပေါက်တူးကို ချကာ အနောက်ဘက် လှေကားမှ ကျောင်းဆောင်ပေါ် အသာလေး တက်ခဲ့သည်။
ရင်လျှားထားသော လုံချည်မှာ ရေစိုနေသော်လည်း ကိုယ့်ငွေ့က နွေးနေသည်။ တွဲလျှောက်စဉ် ဆွေဆွေ၏ နို့အုံ အိအိကြီးက ကိုအောင်နိုင်၏ ရင်ဘက်နှင့် ထိမိရာ အောင်နိုင်၏ လီးကြီးမှာ တောင် လာသည်။ အောက်ခံဘောင်းဘီ ဝတ်မထားသဖြင့် ပုဆိုးအောက်မှ ထိုးထိုးထောင်ထောင်နှင့် ဖေါင်းဖေါင်းကြီး ဖြစ်နေသည်။ ခေါင်းငိုက်စိုက်ကာ လျှောက်နေသော ဆွေဆွေသည် ကိုအောင်နိုင်၏လီး ပုဆိုးအောက်မှ ငေါငေါကြီး ဖေါင်းလာသည်ကို တွေ့ရသဖြင့် “ခစ်” “ဘာဖြစ်လို့လည်း ဆွေ” “ဘာမှ မဖြစ်ပါဘူး ကိုအောင်နိုင်၊ ရပြီ ဆွေ့ကို ကုတင်ပေါ်ဘဲ တင်ပေးခဲ့” “အေး အေး” ဆွေဆွေ့ဝိတ်က မနဲပေ။ တွဲလျှောက်တုန်းက မသိသာပေမဲ့ ကုတင်ပေါ် ထိမ်း၍ တင်တော့မှ မနိုင်မနင်း ဖြစ်ကာ “ဝုန်းးးး အမေ့” နှစ်ယောက်သား ကုတင်ပေါ် ထပ်လျှက် လဲသွားသည်။ ဆွေဆွေကလည်း အလန့်တကြား အောင်နိုင့်ကို ဖက်ထားသလို၊ အောင်နိုင်ကလည်း အခွင့်အရေးရတုန်း မလွှတ်တန်း ဖက်ထားသည်။ ယခုအချိန်တွင် အောင်နိုင့်စိတ်ထဲ မဝေဆိုတာ မသိတော့ပေ။ ဆွေဆွေလည်း ကိုအောင်နိုင်ကြီး မဝေကို လိုးနေသော စောင့်ချက် ကြမ်းကြမ်းများကို မြင်ယောင်ကာ စောက်ပတ်ထဲမှ အရည်ချွဲချွဲများ စိမ့်ထွက်လာသည်။ “ကိုအောင်နိုင်၊ ဖယ်ပါဦးရှင်၊ အသက်ရှူလို့ မဝလို့ပါ” “ပြွတ် ပြွတ် ပြွတ်အု အု အိ အို ” အောင်နိုင်သည် ဘာမျှ ပြန်မပြောဘဲ ဆွေဆွေ၏ နှုတ်ခမ်းကို နမ်းလိုက်သည်။ လက်ကလည်း ဆွေဆွေ၏ တင်ပါးကို ရေစိုနေသော ထမိန်ပေါ်မှ ပွတ်နေသည်။ ဆွေဆွေသည် ကိုအောင်နိုင်၏ ရင်ဘက်ကို တွန်းသော်လည်း အားမပါပေ။ ထိန်းသိမ်းရမည့် ကိုယ်ကျင့်တရား ဟူသည် နှစ်ဦးစလုံးတွင် ပျောက်ဆုံးကာ ” အတွေ့ ” ကြောင့် ကာမ ရမ္မက်ကျောသို့ စီးမျောကြတော့မည်။ “ဝုန်းးးးး ဂျိန်းးး ဒလိန်းးးလိန်းးးး လိန်းးး” မိုးကလည်း ရွာ၍ ကောင်းစဲပင်။ ကိုအောင်နိုင်၏ နမ်းချက်တွေက ပြင်းပြလာသလို ဆွေဆွေလည်း အောင်နိုင့် လည်ပင်းကို သိုင်းဖက်ကာ ပြန်လည် နမ်းရှိုက်နေသည်။ တင်ပါးကို ပွတ်ရင်း ထမိန်ကို လိတ်တင်နေရာ ခါးလယ်ထိ လန်သွားပြီ။ ဆွေဆွေကလည်း အောင်နိုင့် ပုဆိုးအား အာသာ ငန်းငန်းနှင့် ဆွဲတင်လိုက်သည်။
အောင်နိုင်သည် ဆွေဆွေအား ပတ်လတ် လှန်လိုက်ပြီး သူ၏ အင်္ကျီနှင့် ပုဆိုးကို ချွတ်လိုက်သည်။ မိုးစဲသွား၍ ဖြူဖြူရောက်လာလျှင် ပြဿ နာတက်မည်ကို စိုးရိမ်သဖြင့် ခက်သွက်သွက် လှုပ်ရှားမှ ဖြစ်မည်။ ဆွေဆွေကတော့ တောင်မက်နေသော အောင်နိုင်၏ လီးကြီးကို မျက်လုံးမှ မခွါပေ။ ကိုအောင်နိုင်၏ လီးမှာ လက်ရှိ သူတွဲနေသော ရီးစားများ၏ လီးထက် ပိုတုတ်ကာ ရှည်သည်။ နောက်ပြီး မဝေအား ကိုအောင်နိုင် အားရပါးရ စောင့်လိုးသလို လိုးတာလည်း ခံခြင်ခဲ့တာ ကြာပြီလေ။ ဆွေဆွေ၏ ထမိန်ကို ဆွဲချွတ်နေရာ အလိုက်သင့် ဖင်ကြွပေးလိုက်သည်။ ထမိန်ကွင်းလုံးကျွတ်သွားသော် ဆွေဆွေ၏ မိမွေးတိုင်း အလှက ထင်းကနဲ ပေါ်လာသည်။ “ပြွတ် ပြွတ် ပြွတ် ပြွတ် အိုးးးး “ ဟင်းရည်သောက်ပန်းကန် အသေးခန့်သာရှိသော နို့အုံနှစ်ဖက်ကို အားရပါးရ ဖျစ်ညှစ်ကာ တစ်လှည့်စီ စို့နေသည်။ ဆွေဆွေ၏ နို့များသည် အစို့ခံ အညှစ်ခံရပါများ၍ ပျော့နေသောလည်း စို့လို့ ကိုင်လို့ ကောင်းလှသည်။ ဆွေဆွေလည်း တဟင်းဟင်းနှင့် အဖျားတက်သလို ညည်းနေသည်။ တဖြည်းဖြည်းနှင့် အောင်နိုင်၏ ခေါင်းသည် အောက်သို့ လျှောသွားပြီး ဆွေဆွေ့ ပေါင်ကြား ရောက်သွားသည်။ ဘာဂျာမှုတ်တော့မည်မှန်း ရိပ်မိသဖြင့် ဒူးနှစ်ဖက် ထောင်ပေးလိုက်သည်။ ရေချိုးပြီးကာစ စောက်ဖုတ်လေးမှာ စပ်ပြာနံ့ သင်းသင်းလေး မွှေးနေသည်။ စောက်မွှေးများမှာ အထူကြီး မဟုတ်ဘဲ ခပ်ပါးပါး ပေါက်နေသည်။ စောက်ပတ် နှုတ်ခမ်းသားအား လက်ဖြင့် ဖြဲလိုက်ရာ အတွင်းသား နီတာရဲလေးများ ပေါ်လာသည်။ ထို စောက်ပတ် အတွင်းသားထဲ လျှာဖြင့် သပ်တင်ကာ ထိုးမွှေလိုက်ရာ “အ ကိုအောင် အမေ့ ရှီးးးးးး” ဆွေဆွေ့တစ်ကိုယ်လုံး ကော့လန်သွားသည်။ ကိုအောင်နိုင်၏ လျှာက စောက်ပတ်ထဲတွင် ဝက်မှီးလို ထိုးမွှေနေသည်။ စောက်ပတ်ထဲမှ အရည်များ ပါးစပ်မှာ ပေနေပြီ။ စောက်ပတ် လျှက်ရင်း ဘယ်လက်က စောက်စိလေးကို ပွတ်ချေကာ၊ ညာလက်က စအိုပေါက် စူစူ ညိုညိုလေးကို လက်မဖြင့် ပွတ် ကလိနေသည်။ စောက်ပတ်ကို လျှက်ရင်း လျှာက တစ်ချက် တစ်ချက် စအိုကို လျှက်လိုက်သေးသည်။
ပြီးနောက် လက်မဖြင့် စအိုပေါင်ထဲ ဖိသွင်းလိုက်ရာ “ဇိ ဇိ ဇွိ အ စောက်ပတ်လျှက် ခံဘူးသော်လည်း ယခုကဲ့သို့ ဖင်ပေါက်ရော စောက်စိပါ တစ်ပြိုင်နက်တည်း ကလိ မခံဘူးသဖြင့် အရသာတွေ့နေသည်။5mins ပင် မကြာပေ “အ အ အ အ ပြီးပြီ ပြီးပြီ ကိုအောင် အ အ အ အ အားးးးး ရှီးးးးး ဟားးးးး ကောင်းလိုက်တာ ကိုအောင်ရယ် ဟားးးးး” ဆွေဆွေ့ကိုယ်လုံးလေး အိမ်မြောင် အမြှီးပျက်လို တစ်စက်စက်တုန်ကာ တစ်ချီ ပြီးသွားသည်။ အောင်နိုင်သည် ပေါင်ကြားတွင် ဒူးတုတ် ထိုင်လိုက်ရာ ဆွေဆွေသည် အောင်နိုင့် လည်ပင်းကို ဆွဲဖက်လိုက်ပြီး စောက်ရည်တွေ ပေပွနေသော ပါးစပ်ကို အငမ်းမရ နမ်းရှိုက်လိုက်သည်။ “ချစ်သွားပြီ ကိုအောင်ရယ်” “ကောင်းလား ဆွေ” “အွန်း” “ဒီထက်ကောင်းအောင် လိုးပေးမယ်နော်” “လိုး လိုး အားရပါးရသာ လိုးပါရှင်” အောင်နိုင်သည် လီးကို စောက်ပတ်တွင် တေ့လိုက်သည်။ ပြီးနောက် ဆွေဆွေ၏ ခြေထောက်နှစ်ဖက်ကို ထမ်းလိုက်ပြီး အားရပါးရ စောင့်လိုးတော့သည်။ “ဗျွတ် ဗျွတ် ဗွတ် ဗွတ် အ အ အ အ အ အ” အောင်နိုင်၏ စောင့်ခက်တွေ ပြင်းထန်လွန်းသည်။ ကုတင်ကြီးပင် တဝုန်းဝုန်း တကျိကျိ မြည်နေသည်။ ဆွေဆွေကလည်း ထိုကဲ့သို့ အားရပါးရ စောင့်လိုးခံရတာ သဘောကြသည်။ “စောင့်စောင့် ကိုအောင် အားရပါးရစောင့် အ အ အ အ ဆွေဆွေ နောက်တစ်ချီ ပြီးတော့မည်မှန်း သဘာအရ သိလိုက်သည်။ ထို့ကြောင့် စောင့်လိုးတာ ရပ်လိုက်ပြီး ဆွေဆွေ့ ခြေထောက်နှစ်ဖက်ကို ပုခုံးပေါ်မှ ချလိုက်သည်။ “အာာာာာ ဘာလို့ ရပ်လိုက်တာလည်း” “ဆွေ အောက်ကနေ ပင့်ပေး၊ ဒါမှ ကောင်းကောင်း ပီးမှာ” ဆွေဆွေလည်း ပြန်မပြောတော့ဘဲ ကိုအောင်နိုင်၏ ခါးကို ဖက်လိုက်သည်။ ပြီးနောက် အောက်မှ ကော့ကော့ ပင့်ပေးတော့သည်။ ဆွေဆွေသည် အောက်ပေး ကောင်းလှသည်။ ကော့ပေးလိုက်တိုင်း လီးကို ညှစ်ညှစ်ယူသလို ဖြစ်ရာ အောင်နိုင်လည်း အရသာ ရှိလှသည်။ ထို့ကြောင့် ဆွေဆွေ၏ ပင့်ချက်နှင့်အညီ လီးကို ကော့ကော့ ထိုးပေးလိုက်ရာ “ပြွတ် ပြွတ် ပျစ် ပျစ် အ အ အ အ အားးးးးး ရှီးးးးးး ဟားးးးးးး” ဆွေဆွေ စောက်ပတ်လေး ပွစိပွစိနှင့် လီးကို ညှစ်ရင်း အရည်များ ထွက်လာသလို အောင်နိုင့် လီးမှ သုပ်ရည်များ ဆွေဆွေ့ သားအိမ်ထဲ ပန်းထုတ်လိုက်သည်။
“အားးးး ကောင်းလိုက်တာရှင် အင်းးး ဟင်းး ဟင်းးးး” နှစ်ယောက်သား ထပ်လျှက် အမောဖြေလိုက်သည်။ ပြူတင်းပေါက်မှ ချောင်းကြည့်နေသော ကိုမြမောင်ကို နှစ်ယောက်သား မမြင်မိကြပေ။5mins ခန့် နားပြီးသော် “ကဲ ဆွေ၊ မဝေတို့က ညနေမှ ပြန်လာမှာဆိုတော့ အချိန်ရှိတုန်းလေး ဟဲဟဲ” “ဖြူ ပြန်လာတော့မယ် ထင်တယ် ကိုအောင်” “ဖုန်းဆတ်ကြည့်ကွာ” “အွန်းးး” “တူ တူ တူ တူ “ ဖြူဖြူအား လေးဘက်ကုန်းခိုင်းပြီး ကိုအိုက်စံက နောက်မှ ခါးကိုကိုင်ကာ အားရပါးရ စောင့်လိုးနေချိန်တွင် ဖြူဖြူ၏ phone အသံမြည်လာသည်။ ကိုအိုက်စံသည် လီးတပ်လျှက်ဖြင့် ဖုန်းကို ဖြူဖြူ့အား ပေးလိုက်ကာ နောက်မှ ဖြေးဖြေးခြင်း ညှောင့်လိုးနေသည်။ “အအ Hello ဆွေ “ ဖြူ ဘယ်အချိန်လောက် ပြန်လာမှာလည်း၊ ခု ဘယ်ကို ရောက်နေတာလည်း ” ဖြူ ညနေပိုင်းမှ ပြန်ဖြစ်မယ် ဆွေ အ မိုးတွေ မိုးတွေ ရွာနေလို့ လေ” ဖြူ ဘာဖြစ်နေတာလည်း တ အ အ နဲ့ ဖြေတာလည်း အပေါက်အလမ်း မတည့်ဘူး ” ဖြူ ဘာမှ ဘာမှ မဖြစ်ဘူး ဆွေ အ အ ဒါဘဲနော် အ စောင့်စောင့် ကိုအိုက်စံ စောင့်စောင့် အ အ အ အ အားးးး ရှီးးးး ဟားးးးး”တစ်ဖက်မှ ဖုန်းချသွားသည်နှင့် ကိုအောင်နိုင်က “ကဲ ဆွေ၊ ဒီကနေ့တော့ ကိုယ်တို့နှစ်ယောက် အားရပါးရ ချစ်လို့ ရပြီမလား” “ချစ်ပါရှင် ချစ်ပါ အဟင်းးးး” “Ok လေ၊ စ ကြစို့” “ဗျွတ် ဗျွတ် ဗွတ် ဗွတ် အ အ အ အ အားးးးး” ထိုနေ့က ကိုအိုက်စံသည် ဖြူဖြူအား တစ်နေကုန် မနားတမ်း လိုးဖြစ်ကြသလို၊ ကိုအောင်နိုင်ကလည်း ဆွေဆွေ့အား နည်းမျိုးစုံနှင့် လိုးရာ ညနေပိုင်းမှ လိုးပွဲ အသီးသီး ရပ်တန့်သွားသည်။ ဖြူဖြူဆိုသော အပျိုရိုင်းလေးသည် အကြာကြီး လိုးပေးနိုင်သော သူ တစ်ချီပြီးလျှင် သူမအား သုံးချီခန့် ပြီးအောင် လိုးပေးနိုင်သော ကိုအိုက်စံ၏ လီးကြီးကို စွဲလမ်းသွားသကဲ့သို့၊ ဆွေဆွေသည်လည်း သူမနှင့်အတူ ပြီးအောင် ထိန်း၍ လိုးပေးနိုင်သော၊ သူမ၏ ရီးစားများထက် အလိုး အစောင့် သန်သော ကိုအောင်နိုင်၏ သဘာရင့် အိမ်ထောင်သည် လီးကြီးကို နှစ်သက်သွားတော့သည်။ ပြီးပါပြီ။
ညိုမီသည်အသက် ၂၇ နှစ်ရှိပြီဖြစ်သဖြင့်အပျိုကြီးစာရင်းသို့ဝင်စပြု လေပြီ။အရပ် ၅ပေ ၄လက်မကျစ်လစ်တောင့်တင်းသောကိုယ်လုံး ကိုယ်ပေါက်ရှိပြီး မဖြူမညိုခပ်လတ်လတ်အသားဖြင့် အလှကြီးမဟုတ် သော်လည်းရွက်ကြမ်းရေချိုထက်သာသောရုပ်ရည်ရှိပါသည်။ဆံပင်မှာ ခါးလယ်ခန့်ရှိပြီးထူထဲသွယ်တန်းသောမျက်ခုံးမဲမဲကလေးနှင့်အတူဝိုင်း စက်တောက်ပသောမျက်လုံးအစုံရှိပါသည်။ဖြောင့်စင်းသောနှာတန်က လေးနှင့်ညီညာဖြူဖွေးသောသွားတန်းကလေးကြောင့်ပြုံးရီလိုက်လျင် ပို၍ချစ်စရာကောင်းပါသည်။နှုတ်ခမ်းလေးကမူအနည်းငယ်ထူသလိုရှိ သော်လည်း ထိုနခမ်းထူလေးများကြောင့်ပင်တနည်းတဖုံစွဲဆောင်မှုရှိ သောမျက်နှာလေးကိုပိုင်ဆိုင်ထားပါသည်။ အသက် ၂၇ နှစ်ရှိပြီဖြစ်သော်လည်းနုနယ်ပျိုမြစ်သောမျက်နှာလေး ကြောင့် ၂၀ ကျော်ခါစအပျိုကလေးလိုဖြစ်ပါသည်။ညိုမီသည်အပျိုကြီး ဖြစ်လာသော်လည်းတက္ကသိုလ်တက်စဉ်က ပထမနှစ်တွင်ရည်းစား တယောက်နှင့်နောက်ဆုံးနှစ်တွင်ရည်းစားတယောက်ထားခဲ့ဘူးပါသည် ပထမနှစ်တုန်းက အထက်တန်းကျောင်းကတည်းကသူငယ်ချင်းဖြစ်သူ ကောင်လေးတယောက်နှင့်ချစ်သူဖြစ်ခဲ့ဘူးပါသည်။ထိုကောင်လေးမှာ ညိုမီနှင့်သက်တူရွယ်တူဖြစ်ခါ အရပ်မြင့်မြင့်အသားဖြူဖြူကြံ့ခိုင်သော ကိုယ်လုံးကိုယ်ပေါက်နှင့်လူချောကလေးဖြစ်သဖြင့်ညိုမီနှင့် ရှေ့သွား နောက်လိုက်ညီပါသည်။ ပြီးတော့သူတို့နှစ်ယောက်တယောက်ကိုတယောက်အတော်ချစ်ခဲ့ကြပါ သည်။မကြာခဏချိန်းတွေ့ပြီးချစ်ရည်လူးခဲ့ကြဘူးသော်လည်းအလွန် အကျွံအဆငိ့သို့အရောက်မခံပါ။အလွန်ဆုံး 3D ရုပ်ရှင်သွားကြည့် ကြပြီးရုပ်ရှင်ရုံထဲတွင်နခမ်းစုပ်နမ်းခြင်းနှင့်ဟိုကိုင်သည်ပွတ် သာလုပ်ခဲ့ ကြဘူးလေသည်။သို့သော်ကောင်လေးမှာမျက်နှာများသူဖြစ်ပြီးရည်း စားတွေမှိုလိုပေါက်ထားသည်ကိုလက်ပူးလက်ကြပ်သိရှိသဖြင့်ညိုမီဘက်ကအဆက်ဖြတ်လိုက်သဖြင့်ရည်းစားသက်တမ်းတနှစ်တောင်မပြည့်လိုက်ပါ။ ရည်းစားနှင့်အဆက်ဖြတ်ခါစက လွမ်းသလိုလိုဆွေးသလိုလိုဖြစ်ပြီး ဂဏာမငြိမ်သလိုခံစားရသော်လည်းခဏသာဖြစ်ပါသည်။ဤသို့ဖြင့် အေးဆေးတည်ငြိမ်စွာ ၂ နှစ်တိုင်တယောက်တည်းနေလာခဲ့ပြီးနောက် ဆုံးနှစ်ကျမှတက္ကသိုလ်မှဆရာပေါက်စလေးတဦး၏အချစ်ကိုလက်ခံ လိုက်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။သို့သောထိုဆရာမှာညိုမီ့အပေါ်အချစ်ထက်တဏှာများသည်ဟုညိုမီခံစားမိလေသည်။ချိန်းတွေ့တိုင်းရသမျှအခွင့်အရေး ယူတတ်ပါသည်။ညိုမီလည်းသွေးနှင့်ကိုယ် သားနှင့်ကိုယ်ဖြစ်သဖြင့် သာယာမိသော်လည်းဒါကိုချည်းစိတ်အားသန်နေသောသူ့ကိုညိုမီ စိတ်ပျက်လာခဲ့သည်။သို့ဖြင့်သီးသန့်ခန်းကလေးများပါသောကော်ဖီဆိုင်အတွင်းညိုမီကိုတစတစအတင်းကြမ်းလာပြီးကာမကိုဇွတ်ယူရယူရန် […]
မလွှဲသာလို့သာ ရီလေးမှာ စက်ဘီးကို ဆွဲပြီး ထွက်လာရသည်။ ဒီကြည်ကြည်အေး ဆိုသော မိန်းမဆီကို သွားချင်တာမ ဟုတ်ပေ။ ဒီမိန်းမက ရပ်သိရွာသိ နှာဘူးမဖြစ်သည်။ အသက်က သုံးဆယ်လောက်။ လူကတော့ လှသည်။ မိန်းမချင်း မနာလို လောက်အောင် လှသည်။ သူက ဈေးရုံထဲတွင် ကလေးဝတ် အဝတ်အစားလေးတွေ ရောင်းသည်။ ဒါပေမယ့် ဒါက အဓိက အလုပ်မဟုတ်။ ဈေးထဲတွင် နေ့ပြန်တိုးပေးတာက ကြည်ကြည်အေး၏ အဓိကအလုပ်ဖြစ်သည်။ ကြည်ကြည်အေးဆိုင်မှာက ကောင်လေးတွေ တရုန်းရုန်းနဲ့ အမြဲစည်ကားနေသည်။ ရီလေးမှာ ကြည်ကြည်အေးကို ကြည့်လို့ရတာမဟုတ်။ ကြည်ကြည် အေးက မုဆိုးမဆိုပေမယ့် အပျိုရှုံးလောက်အောင်ကို ဝတ်စားပြင်ဆင်သည်။ သေသွားသော ယောက်ျားထားခဲ့သည့် စီးပွား ဥစ္စာများနှင့် ချမ်းသာနေသည်။ ရင်ထဲက ဘယ်လိုပဲ မကျေနပ်ပေမယ့် တကယ့် […]